This entry was posted on Saturday, October 18, 2008 and is filed under ဟိုရေးဒီရေး . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
Good မှ Good ကွာ။ တော်လိုက်တဲ့ ငါ့မောင်လေး
အားးးးးးးးး အညာသားရာ... ပြောရက်လိုက်တာ.... အင်းအင်း မှတ်ထားကျပ်ပြား :D :P
အမှန်တွေ သိပ်မရေးတဲ့လေ ။ ဟဲဟဲ ။
ကိုညာ ကတော့ လုပ်လိုက်မှဖြင့် ဟာသပဲ ။ ကောင်းသဗျာ။
သဘောတွေ့ သဗျ ရေးတာလေးကို ။ :D
တိနေတယ် အဲဒါကြောင့်မလို့ အစ်ကိုတို့ကို မ TGA တာ။
ပီးတော့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ပဲတောက်နေရတာ ပေါ်ကုန်မှာဆိုးလို့.. :P :P
ခင်ဗျားတို့ ၂ ယောက်ကလဲ အတိုင်အဖောက်ကို ညီနေတာပဲ ၊ အရင်က အကျင့်တွေ မပျောက်ကြသေးပဲကိုး
ဟိုကောင် ငကျန် ကလဲ အခြေအနေပေးရင် ခင်ဗျားတို့ကိုဆော်နေကြကိုး :P :P :P :P
သုံးလလောက်ရှိနေပီ ဒီပို့စ်ကိုပဲ မြင်မြင်နေရတယ် အသစ်ရေးအုံးးးးးးးး နာ့မျက်နှာကြီး ဘယ်နားထားရမှန်း မသိတော့ဘူး။ ဒီပို့စ်ကို အောက်ကျသွားမှာစိုးလို့ အသစ်မရေးတာလား မသိဘူး နောက်တခါ လာမှ သိအုံးမယ်